Ukubukeka Ohambweni Lwamakhasimende Eholide | Martech Zone
Uma ungakabhalisi okwamanje, ngincoma kakhulu indlela ye- Cabanga nge-Google isayithi nephephandaba. IGoogle ikhipha okokusebenza okumangazayo okusiza abathengisi namabhizinisi ukukhulisa ibhizinisi labo online. Ku-athikili yakamuva, benze umsebenzi omuhle ekubukeni uhambo lwama-3 oluvamile lwamakhasimende olubonakala luqala ngo-Black Friday:
Indlela eya kumthengisi ongalindelekile - ngokuqala ngosesho lweselula, lolu hambo lunikeza ukuqonda kumuntu othile okuthengiselana ngaye ku-inthanethi.
Isinqumo sokulungisa noma ukufaka esikhundleni - omunye umuntu useshela nge-desktop bese uyiselula, futhi usebenzisana nezikhangiso ekugcineni ukufinyelela esinqumweni sokuthenga.
Imfuno yokudlala yamaqhawe - i-gamer icwaninga ngokuthengwa kwayo okulandelayo kwekhonsoli, isesha ngeselula nangedeskithophu, ivakashele izingosi zabathengisi nezindawo zezimboni ukucwaninga ngokuthenga kwayo okulandelayo.
IGoogle inikela ngezindlela ezithile zokuthatha, kufaka phakathi ivolumu yocwaningo abathengi abakwenzayo, ukuthembela kuselula, nokuthi laba bathengi abagxile kuzipho.
Ngingathanda ukuthi ugxile ezicini ezimbalwa okungafanele zinganakwa:
Abantu babhampa phakathi kwamadivayisi nabathakathi - Ngisanda kuthenga i-PlayStation entsha. Bengikade ngisecingweni lwami kancane ngenkathi ngibuka ithelevishini, ngifunda izibuyekezo futhi ngibheka izinyanda. Lapho-ke, lapho ngihlala etafuleni lami, ngangibheka amavidiyo futhi ngibuke amavidiyo wokubuyekeza. Ngaze ngavakashela iBestBuy izikhathi ezimbalwa ukubona ukuthi babenani. Umngani wami ungumdlali omkhulu kakhulu, ngakho-ke ngixoxe naye nge-Facebook futhi ngenza isinqumo sokuthi ngizothengani. Ekugcineni, ngithole inani elikhulu futhi ngalithenga online nge-Wal-mart. Ngakho-ke .. iselula, ideskithophu, usesho, ezomphakathi, ukubuyekezwa, nokuthengisa konke kudlale indima ohambweni lwami.
Abantu bachitha isikhathi esiningi becwaninga - Lolu hambo alukho kuseshini eyodwa, lungaphezu kwamasonto nezinyanga. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi amakhukhi ayaphela, imikhankaso iyashintsha, imiphumela yosesho iyahamba… konke ngenkathi umthengi ecwaninga ngesinqumo sakhe esilandelayo sokuthenga. Ukuze umkhiqizo noma insiza yakho ihlale ibonakala, kufanele ungapheli amandla ukugcina ubonakala futhi ubalulekile kubo.
Abantu badla ithani locwaningo lokuqukethwe - Angikwazi nokukutshela ukuthi ngifunde, ngabuka, futhi ngaxoxa kangaki ngaphambi kokuthenga uhlelo lwami. Ngizokutshela ukuthi isinqumo sami sokuthenga sabhaliswa ngesikhathi ngiqhubeka nokucwaninga. Ekugcineni ngithenge amakhithi wePro neVR nge-PlayStation yami ngemuva kokubona izibuyekezo nokubuka amavidiyo ngamakhono. Futhi lapho sengithole uhlelo, ngahamba ngayothenga aphinde ukuthola izesekeli eziningi! Okuqukethwe akuhambisanga isinqumo sami kuphela, kuphinde kwaqhuba ukuthengisa okungeziwe.
Nayi i-infographic ephelele, Ngaphakathi kohambo lokuthenga lwabathengi abathathu abafuna nsuku zonke:
Tags: umthengiukuthenga abathengiUkuhamba kwamakhasimendeIzibuyekezoSesha Marketingisinqumo sokuthengacabanga ngeGooglei-walmart